ကိုယ့်ဘဝရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအချို့လူတွေနဲ့ အချို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပါပဲ။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေဟာ ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းရင်းသေချာသိအောင်ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြုပြင်ပါ။ အခြားလူတွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ သူတို့ကိုပြောင်းလဲလို့မရတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့သူတို့အပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားကိုသာ ပြောင်းလဲပစ်ရမှာပါပဲ။ လွယ်လွယ်နဲ့စိတ်မညစ်ရစေဖို့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် တစ်ပုံချင်းထောက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။ #BAWA101
ကိုယ့်ဘဝမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့အချို့အရာတွေကို ချရေးကြည့်ပါနော်။ ✍️✍️
အရာအားလုံးကို အကောင်းမြင်တတ်လာတဲ့အခါ ပိုကံကောင်းလာတယ်လို့ထင်လာတတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်သာ စိတ်သာရှင်စော၊ ဘုရားဟော ဆိုတဲ့အတိုင်း စိတ်ကျန်းမာရေးကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာတယ်ဆိုတာက စိတ်ပျော်ရွှင်နေတာ၊ စိတ်အေးချမ်းနေတာ၊ စိတ်အားတက်ကြွနေတာ၊ စိတ်တည်ငြိမ်နေတာ စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုးခံစားချက်တွေမှန်သမျှ ဘာကိုမှ မခံစားနေတာမျိုးပါ။
🌹 လှပတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသာ ဖန်တီးလိုက်ပါ 🌹
ဘဝမှာ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်နေမယ့်အမှန်တရားတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အမှန်တရားတွေက ဘယ်ပြဌာန်းစာအုပ်မှာမှ မသတ်မှတ်ထားပေမယ့် လက်တွေ့ဘဝအတွက် အရမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားတွေပါပဲ။ ဘဝမှာ ရှင်သန်လာရင်းနဲ့မှ တဖြည်းဖြည်းသိလာရတဲ့အမှန်တရားတွေပါ။ ကိုယ့်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့စာသားလေးတွေရှိရင်ရှယ်သွားလိုက်ပါအုံး။ #BAWA101
မိသားစုဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးတစ်အိမ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်ကို လှေငယ်နဲ့ဖြတ်သန်းရသလိုပါပဲ။ တစ်ယောက်ထဲလှော်နေလို့လည်း ခရီးမရောက်နိုင်သလို၊ ဘယ်သူမှမလှော်ဘဲ အဆင်သင့်လိုက်ပါနေလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့်တော့ နွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးတစ်အိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက် အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတာပါ။
Life isn't finding shelter in the storm. It's about learning to dance in the rain. Sherrilyn Kenyon ပြောထားတဲ့စကားလေးက သိပ်ကိုလှပါတယ်။ “ဘဝဆိုတာ မုန်တိုင်းထဲမှာ ခိုလှုံရာရှာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မိုးစက်တွေနဲ့အတူ ကခုန်တတ်ဖို့ သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်”တဲ့။ ဒီစာသားလေးဖတ်မိတော့ တွေးမိသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘဝကမုန်တိုင်းထန်တယ်ဆိုရင် ဒီမုန်တိုင်းထဲကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက် ခိုလှုံနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုရှာရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မုန်တိုင်းထဲက မိုးရေစက်တွေစိုရွှဲနေရင်းနဲ့တောင် ပျော်ရွှင်အသားကျနေအောင် နေတတ်ဖို့သင်ယူရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘဝက အရမ်းကိုဆိုးဝါးနေတယ်လို့ ခံစားရချိန်မှာ ပြန်တွေးသင့်တဲ့အရာများ
"ကိုယ့်ဘဝက အရမ်းကိုဆိုးဝါးလိုက်တာ…..အခြားသူတွေက ကိုယ့်ထက်အများကြီးကံကောင်းပါသေးတယ်” လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်မျိုး ဘဝမှာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုတာ လူတိုင်း တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခံစားနေတဲ့အချိန်အတောအတွင်းမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အဆုံးဝါးဆုံးလို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လိုအချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ပြီးကုစားနိုင်ရင်ကုစား၊ မကုစားနိုင်ရင် စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ သိမ်ငယ်မှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကိုပါ ရလာနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝပြန်ပြီး နလန်မထူနိုင်တော့တဲ့အထိ မဆိုးဝါးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဘဝမှာကြုံလာတတ်တဲ့အခက်အခဲတွေ၊ အနှောင့်အယှက်တွေ၊ အတိုက်အခံတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ။ ဘယ်လိုကြုံတွေ့လာရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှပညာရှိများရဲ့အဆိုအမိန့်များကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ #BAWA101